Fifidianana 2018 : Tsy hilefitra amin’ny fanakorontanana ny Fitondrana -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana 2018 : Tsy hilefitra amin’ny fanakorontanana ny Fitondrana
14/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha nihaona tamin’ny mpanao gazety ny minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana (MCRI) sady mpitondra tenin’ny governemanta, Harry Laurent Rahajason, omaly, mazava ny fanambarany fa tsy hilefitra amin’ny fanakorontanana ny Fitondram-panjakana.
Nambarany mantsy fa matetika misy mikononkonona fanakorontanana hatrany rehefa vanim-potoan’ny fifidianana. Izany hoe, raha ny voalaza, mba hampandeha tsara ny fifidianana 2018, tsy hisy fanakorontanana saim-bahoaka amin’ny lafiny rehetra azo ekena. “Na amin’ny lafiny inona , na amin’ny lafiny inona ka misy mieritreritra fanakorontanana, manao izay tsy hampandeha am-pitoniana sy ara-dalàna ny fifidianana 2018, ary mikasa ny hamotika ny firaisam-pirenena sy ny fitoniana, hijoro ary tsy hilefitra amin’izany ny Fitondrana”, hoy ny minisitra Harry Laurent Rahajason.
Ankoatra izay, raha ny mahakasika ny asa fanaovan-gazety indray, dia nanambara ny minisitra fa tokony hanaja tsara ny etika sy deôntôlôjia ny mpanao gazety, eny fa na misy aza ny fahalalahan’ny mpanao gazety, tsy tokony hihoa-pefy izy ireo, ary tokony manaraka sy manaja tsara an-tsakany sy an-davany ny lalàna mifehy izany asa fanaovan-gazety izany. “Misy hatrany ireo manararaotra izany fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izany, ka lasa tsy manaja intsony ny lalàna mifehy. Noho izany, adidiko ny miteny mba hamerenana amin’ny laoniny ny soatoavin’ny asa fanaovan-gazety sy ho fanatsarana izany”, hoy ny minisitra hentitra.